सावधान ! दहीसँग यी ५ चिज कहिल्यै नखाऔँ- जनिराखौ .. – ईमेची डटकम
सावधान ! दहीसँग यी ५ चिज कहिल्यै नखाऔँ- जनिराखौ ..
गर्मीको स्वादिलो परिकार हो दही । दहीको खपत गर्मी मौसममा निकै बढ्छ । शीतल स्वभावको भएकाले दही तथा दहीबाट बनाइने मट्ठा, मोही आदिलाई गर्मी मौसममा निकै रुचाइन्छ ।
दही स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिन्छ तर यसलाई केही चिजसँग मिसाउनु हुँदैन अन्यथा फाइदाको साटो नोक्सान हुनसक्छ । यस्ता चिजहरूका साथ दही खाँदा शरीरमा टक्सिन बन्न थाल्छ । फलस्वरूप वाकवाकी तथा उल्टी हुने, पेटमा गडबड हुनेजस्ता लक्षण देखा पर्छन् ।
दही स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो खाद्य पदार्थ हो, यसमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम तथा ल्याटिक एसिड पाइन्छ । उचित ढंगले दहीको सेवन गर्ने हो भने पाचन प्रणाली सुधार्नका लागि यसको अर्को विकल्प छैन भने पनि हुन्छ । तर दहीलाई निम्नलिखित चिजहरूसँग मिसाएर खाएमा भने स्वास्थ्यसमस्या उत्पन्न हुन सकिन्छ :